Zvakanakira eemail mushandirapamwe mudhijitari commerce? | ECommerce nhau
Kune akawanda marongero ayo makambani edhijitari ekutengesa aanogona kushandisa wedzera zvigadzirwa zvako kana masevhisi. Asi pasina mubvunzo imwe inogona kuwanikwa zvirinyore ndeaya akagadzirwa kuburikidza neemail kana email. Mipiro yavo ndeyemhando dzakasiyana sezvo iwe uchizokwanisa kuongorora pazasi.
Izvo zvinonzi tsambambozha Marketing Iyo inozivikanwa nekuti haina miganho yekusvika kune yakakura nhamba yevatengi kana vashandisi. Nebhizimusi rekuwedzera iro mamwe mafirita anogona kushandiswa pane mamwe mamodheru ekushambadzira kusarudza vanogamuchira vatinoda kusvika kuburikidza nemeseji dzedu. Kwete chete padanho renyika, asiwo kuyambuka miganho yepasi rose kana zvichidikanwa mukugadzirwa kwechitoro chedu kana kutengeserana kwepamhepo.
Email mishandirapamwe mukutengeserana kwedigital, kune rimwe divi, chirongwa icho hazvidi kudyara kana mari yakawanda kuti uzviite. Kusiyana nemamwe marongero mukushambadzira kwemazuva ano ayo angangoda isu panguva ipi neipi yekuda mari yekutarisana nemubhadharo wezvitsigiro izvo zviito izvi zvinoda mukutengeserana kwepamhepo.
1 Email mishandirapamwe: chengetedza mari uye zviwanikwa
2 Simbisa kutengesa kwezvako zvigadzirwa kana masevhisi
3 Iyo chiteshi inowanikwa kune vese vashandisi
4 Kurumidza kupindura
5 Kushevedza kuti uite
Email mishandirapamwe: chengetedza mari uye zviwanikwa
Hapana mubvunzo kuti imwe yemabhenefiti akakurisa emushandirapamwe wehunhu ihwohwo kuchengetedza kunogona kugadzirwa mukuverenga kwekambani. Izvi zvinodaro nekuti kukura kwayo muzviitiko zvese kunogara kuchidhura pane mamwe marudzi ezviito. Semuenzaniso, bhokisi retsamba retsika iro rinoshandiswa kushambadzira kuvapo kwechigadzirwa, sevhisi kana chinhu pakati pevatengi. Iko kunodikanwa kubhadhara kubhadharwa kwevashandi, zvishandiso uye masevhisi akanyoreswa nevatengesi. Kusvika pakuti pakupedzisira ichasimudza bhajeti isu tinofanirwa kugutsa chiito chebhizinesi ichi.
Nepo kune rumwe rutivi, hazvigone kukanganwika kuti mhando iyi yemakambani eemail anogona kugadzirwa kubva kukambani yedu uye mune mamwe madhipatimendi ayo. Nenzira iyi, mari dzemushandirapamwe idzi dzichava ne hazvidi kuburitswa kwebasa. Pasina kurega chero nguva kuti mhedzisiro yacho yakanyatsoita kunaka kwekumhanya kwekambani.
Simbisa kutengesa kwezvako zvigadzirwa kana masevhisi
Pasina chokwadi chechokwadi ndechekuti mishandirapamwe yeemail zvakare ine maitiro akanaka kwazvo pakushambadzira. Mune ino kesi, nekuti iwo mugero une simba wekusimudzira zvigadzirwa zvedu nenzira inoshanda kwazvo uye yakaenzana yezvatinofarira zvehunyanzvi. Mupfungwa iyi, inofanira kusimbiswa kuti ino sisitimu inopa zvimwe zvakanaka yatinozofumura nayo pazasi:
Iyo inokutendera iwe kusefa zvikamu zvaunoda kunongedza, zvinoenderana nezera ravo, simba rekutenga, chimiro chehunyanzvi kana murume kana mukadzi wevanhu ava. Saka kuti nenzira iyi, ivo vari muchinzvimbo chekukwirisa iyi nzira yekutengesa.
Unogona kusarudza mhando dzakasiyana dzemishandirapamwe yekusimudzira zvigadzirwa zvako kana masevhisi. Ivo vanobva kubva pakutumira yakasarudzika mameseji kunhau, vachipfuura neruzivo rwezvazvino nhau zvinogadzirwa kubva kune yako nyanzvi chiitiko.
Iwe uri munzvimbo yakanakisa yekusarudza iyo chaiyo nguva yekutumira izvi zviziviso kune vatengi kana vashandisi uye unoenderana nezvimwe zvekunze mamiriro angaite kuti iwe utambise nguva yakawanda kupfuura inodikanwa chaizvo mune dzino kesi.
Kuchinja kwaro kukuru nekugona kusarudza nhanho dzakasiyana dzeruzivo, senge zvinyorwa, nhau kana zvirimo zvekuteerera, pakati pezvimwe zvakakosha. Uye chero zvazviri, ivo vanozoenderana necustomer iyo vatengi vako varipo uye zvakare pane zvigadzirwa kana masevhisi aunovapa ivo pakupedzisira.
Iyo chiteshi inowanikwa kune vese vashandisi
Iwe haurambidzwe mune rako rekutengesa kana rekushambadzira mashandiro nekuti vangangoita vese vashandisi munyika medu vane mukana weInternet kubatana. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ongororo ichangoburwa yakaitwa ne Isu Tiri Zvemagariro inoratidza kuti zvishoma kupfuura 80% yevaSpanish vanoshandisa iyo Internet. Iko, nguva dzese Internet inosvika kuvanhu vazhinji uye email ndechimwe chezvidikanwi zvekutanga zvatinazvo patinosangana ne network. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvakakosha nei email iri imwe yedzakanakisa nzira dzekubatana nevanhu vanofarira.
Iwe unongofanirwa kunyora rondedzero yemakero muemail nezve mazita kana makambani kwaunoda kutumira yako nyanzvi ziviso. Rinenge riri basa rakaoma zvishoma pakutanga, asi ipapo kusahadzika kwese kuchajekeswa nekuve nechiridzwa chitsva chekuratidzira masevhisi ako kana zvigadzirwa.
Aya marudzi emitambo, kune rimwe divi, anokubatsira iwe ne kukwirisa kwepamusoro mune ino maitiro inobvumidza iwe kukurukurirana kukuru nevatengi kana vashandisi. Kunyangwe mukati memasekondi ekutumira iwo meseji kana zvemukati. Hazvishamisi kuti ibasa rekudyidzana kana chiteshi icho pakupedzisira chinovhurira kune ese marudzi ezvinyorwa. Semuenzaniso, mafomu, mavhidhiyo kana audiovisual zvinhu. Kune rimwe divi, iri yemhando yekutaurirana iyo pakupedzisira inobatsira iwe kutsanangura hukama hwaunoda nevatengi vako kana vashandisi chero nguva.
Kushevedza kuti uite
Hapana mubvunzo kuti kuburikidza neemail yehunhu izvi zvinonyanya kukosha kumisa chiitiko ichi. Pamwe nepabhatani kana kufona chinongedzo kana kuburikidza nezviri mukati zvinomiririra zvemhando yepamusoro. Kuti uzvitsaurire kubva pamakwikwi uye nenzira iyi kuti ukwanise kuteedzera kufambira mberi mune rako chiitiko chehunyanzvi kubva panguva yekutanga. Pamusoro peichi chikamu, zvakakosha kuti izvo zvinyorwa zvetsamba zvinogara zvichinakidza. Zvinokurudzirwa zvikuru kuti iwe uzviise iwe mushangu yevagashiri vako kuti uzive izvo zvavangade kugamuchira kubva zvino zvichienda mberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Zvakanakira eemail mushandirapamwe mudhijitari commerce?
Iwo 7 akanakisa SEM maturusi aunofanirwa kuve nawo